Tarisa uone kana iwe uine "mshelper" malware mu macOS uye isu tinokuudza maitiro ekuibvisa | Ndinobva mac
Tarisa uone kana uine "mshelper" malware pane macOS uye isu tinokuudza maitirwo ayo
Pane mashoma kesi maunogona kuve nemarware paMac uye zvisingaite kunze kwekunge iwe uchishandisa pirated software kana kunyorera kunze kweiyo macOS yekushandisa chitoro. Kunyange zvakadaro, Hazvikuvadze kuti nehumwe frequency iwe unotarisa maforodha atinotaura pamusoro apa.
Zviratidzo zvinoratidzwa paMac ine malware kuwandisa kweCUU kushandiswa, izvo zvinoguma neruzha rukuru uye rakanyanya bhatiri kudhiraina pamalaptop Imwe yeanonyanya kuve malware mazuva ano i "mshelper" uye isu tinokudzidzisa maitiro ekuiwona uye kuibvisa.
Nhau dzeiyi malware dzinotorwa kubva ku Apple inotsigira maforamu . Vashandisi vanonyunyuta nezvekushandisa zvakanyanya zviwanikwa, ivo vanoiongorora mune yekutarisa chiitiko, mune iyo CPU kumhanya. Pamusoro pekusagadzikana, pane kunonoka mune mamwe maitiro. Izvi zvinoreva kuti mafeni akabatana kakawanda kupfuura zvakajairwa, nechinangwa chekutonhodza midziyo, zvichikonzera kudonha kwakanyanya muhupenyu hwebhatiri.
Kunyangwe zvisingazivikanwe zviri kuitwa neiyi malware, nekushandisa simba pamusoro zvine musoro, Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti ndeye adware inogadzira macryptocurrencies neMac yedu. Kune rimwe divi, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti yakaiswa pamakomputa mushure mekumisikidzwa kweimwe software, pachinzvimbo chekupararira nedzimwe nzira.
1 Kuti uzviwane:
2 Kana iwe uchifanira kuidzima:
Vhura Chiitiko Monitor, iri mu applications folda uye mukati mekushandisa, kana zvakananga kubva kuSpotlight.
Kamwe mukati, tinya pane iyo CPU tabu uye rongedza nenzira yekuita.
Zvino, scroll to try to find "mshelper". Mune mac akabvunzwa haioneke, nekudaro, haina hutachiona.
Kana iwe uchifanira kuidzima:
Kana iwe wafunga nezve kumisa maitiro, izvi hazviite zvine musoro, nekuti chirongwa ichi chakagadzirirwa kutanga futi.
Saka, iwe unofanirwa kuenda ku Tsvaga - Yemukati yekuchengetedza (kazhinji Macintosh HD) - Raibhurari - LaunchDaemons.
Iyo malware inonzi com.plauncher.plist. Delete iyo faira senge chero imwe.
Iwe unowana imwe faira yaunofanirwawo kudzima munzira inotevera: raibhurari-Yekushandisa Rutsigiro uye pplauncher.
Chokwadi Apple ichave iri kushanda kuwedzera ichi chigamba, asi hazvikuvadze kuti uongorore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Tarisa uone kana uine "mshelper" malware pane macOS uye isu tinokuudza maitirwo ayo
3-in-1 dock yeako Apple Watch, AirPods uye iPhone